Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Alahady, Desambra 24, 2017 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay dia afaka nanao fitsidihana ny tranokala IDS teto Midwestwest aho. Mpanokatra maso ho ahy izy io satria tsy mbola nahita ny fandrosoana nitranga tamin'ny indostrian'ny lozisialy, trano fanatobiana entana ary fanatanterahana aho. Mandrosoa haingana amin'ity taona ity ary nanana adihevitra mahavariana niaraka tamin'ny mpandraharaha amin'ny ambaratonga faharoa aho izay nizara tamin'izy ireo momba ny indostrian'ny ecommerce. Tsy tsapan'ny olona fa misy izany
Indy dia StartUp Friendly
Alatsinainy, Novambra 15, 2010 Talata, Novambra 29, 2016 Lorraine Ball
Douglas Karr, dia iray amin'ireo mpitsara efatra izay nanampy anay hisafidy ny ekipa mpandresy avy amin'ny Startup Indy. Amin'ity resadresaka ity dia miresaka momba ny antony nahatafiditra azy izy, ary ny antony mahatonga ny orinasa teknolojia hanao fanombohana eto Indianapolis. Douglas Karr amin'ny Fitsarana amin'ny StartUp Weekend
Raha nanao fisakafoanana hariva ianao ary nijery tele, dia nanao asa fandraharahana izahay
Sabotsy 13 Novambra 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Lorraine Ball
Tamin'ity faran'ny herinandro ity, mpandraharaha 57 no miasa amin'ny fananganana orinasa vaovao fito. Manomboka amin'ny fitaovan'ny rindrambaiko sy ny haino aman-jery sosialy ka hatramin'ny birao finday azo entina, dia manomboka miangona ireo hevitra. Ary raha liana te hahafantatra izay ho fiafaran'izany rehetra izany ianao, sy izay hataon'ny mpitsara (ao anatin'izany Douglas Karr) eritrereto ny momba ny raharaham-barotra, miaraha aminay amin'ny fampisehoana tambajotra sy famelabelarana farany amin'ny alahady alina: http://www.eventbrite.com/event/851407583
Manomboha faran'ny herinandro - Manova ny tanàna eran'izao tontolo izao
Alatsinainy Oktobra 4, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Lorraine Ball
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia olona 125 avy amin'ny firenena maherin'ny 30 no nandany andro vitsivitsy nifanakalo hevitra momba ny fomba mety hisy fiatraikany tsara amin'ny toekarena manerantany ny Startup Weekend. Toa adala ve? Ny Foundation Kauffman dia vonona ny hiloka 400,000 $ fa tsy isika. Nanolotra fanampiana telo taona izy ireo izay namela ny ekipa StartUp Weekend hanitatra ho an'ny mpiasa maharitra 8. Ity ekipa kely ity dia hanome fanampiana ho an'ny hetsika StartUp Weekend an-jatony erak'izao tontolo izao.
Misy ny fanavaozana eto amin'ny Silicon Prairie
Alakamisy, May 6, 2010 Asabotsy, Septambra 19, 2015 Lorraine Ball
Nandany andro nahatalanjona aho tamin'ny naha-mpitsara ny loka Mira isan-taona. Na dia tsy afaka milaza aminao aza aho hoe iza no nandresy (tsy maintsy hanatrika ny loka Mira ianao amin'ny 15 Mey). Azoko lazaina aminao fa misy zava-baovao tsy mampino mitranga eto Indiana. Mpitsara amin'ny sokajy roa sosialy sy orinasa IT aho. Fahasamihafana hafahafa mifindra avy amin'ireo mpandraharaha mailaka mankany amin'ny fihinanam-bilona vaovao ao anatin'ny fandaminana nentin-drazana. ny